Anti-junta Myanmar journalist Win Tin dies at 85 - Worldnews.com
"I pay my respects to Saya U Win Tin for raising the dignity of the NLD, Burmese politics, the country and mankind,"
Veteran Myanmar Pro-democracy Campaigner Win Tin Dies - TOI
Funeral Service for U Win Tin
The FUNERAL Ceremony OF U WIN TIN
mitv - U Win Tin Dies: Former Journalist And Political Activist
Burma's Next Uprising can be anytime, said U Win Tin (part-1)
2123042014 Dateline Youtube U Win Tin Part I
One Year Anniversary Memorial for Late Veteran Journalist U Win Tin
Preparation for U Win Tin Funeral
Une vie de dissident RSF WIN TIN
U WIN TIN :PASSED AWAY IN YANGON
U Win Tin Decease
U Win Tin Memorial at Judson Hall
A veteran of Myanmar\_'s pro-democracy movement Win Tin has died at the age of 85. The former newspaper editor was one of the founder members of the Anug San Suu Kyi led National League for Democracy. Win Tin\_'s political activities led to his arrest by the ruling military in 1989. He spent 19 years in prison, mostly in solitary confinement, and his incarceration was twice extended. Win Tin was released in 2008. Asamark of defiance he continued to wear his prison uniform in solidarity with t... READ MORE : http://www.euronews.com/2014/04/21/myanmar-democracy-activist-win-tin-dies-at-85 What is in the news today? Click to watch: http://eurone.ws/1kb2gOl euronews: the most watched news channel in Europe Subscribe! http://eurone.ws/10ZCK4a euronews is available in 14 languages: http://eurone.ws/17moBCU In English: Website: http://www.euronews.com/news Facebook: http://www.facebook.com/euronews Twitter: http://twitter.com/euronews Google+: http://google.com/+euronews VKontakte: http://vk.com/en.euronews...
Win Tin, one of the founders of Myanmar\_'s pro-democracy opposition and the nation\_'s longest-serving political prisoner, dies at the age of 84 after battling for decades against military rule. Duration: 00:42...
Myanmar\_'s longest-serving political prisoner, Win Tin, has died aged 85 of kidney failure. Win Tin wasajournalist who helped set up the National League for Democracy with Aung San Suu Kyi. Win Tin spent 19 years in prison after being convicted of anti-government propaganda but was finally freed as part ofageneral amnesty six years ago. Catharina Moh reports....
Veteran Myanmar Pro-democracy Campaigner Win Tin Dies The co-founder of Myanmar\_'s pro-democracy opposition and the nation\_'s longest-serving political prisoner died on Monday at the age of 84, after battling for decades to bring freedom to the formerly junta-run country. Click here to Subscribe to Times of India\_'s YouTube Channel http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=TimesOfIndiaChannel LIKE Times Of India\_'s Page on Facebook: https://www.facebook.com/TimesofIndia...
Myanmar\_'s longest-serving political prisoner, Win Tin, has died aged 85 of kidney failure. Win Tin wasajournalist who helped set up the National League for Democracy with Aung San Suu Kyi. Win Tin spent 19 years in prison after being convicted of anti-government propaganda but was finally freed as part ofageneral amnesty six years ago....
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သဘာပတိအဖွဲ့ဝင်- သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်ရဲ့ ဈာပနအခမ်းအနားကို ရန်ကုန် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရေဝေးသုဿန်မှာ ဒီနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီကနေ ညနေ ၅ နာရီအထိ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ကို လေးစားကြည်ညိုကြတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တွေ အပါအဝင် ဂါရဝပြုကြသူ အင်အား ၅ သောင်းလောက်အထိ ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ ဒီနေ့ ရေဝေးသုဿန်က ဆရာကြီးရဲ့ ဈာပနအခမ်းအနားအကြောင်း RFA သတင်းထောက် မဇင်မာဝင်းက တင်ပြထားပါတယ်။...
Win Tin,aveteran of Myanmar\_'s pro-democracy movement, has died at the age of 85. One of the founder members of the Aung San Suu Kyi-led National League for Democracy, Win Tin was seen as highly influential in the push for reform in the South East Asian nation. He served 19 years in prison under Myanmar\_'s military rulers for his activism, but was released in 2008. An NLD spokesman described him asa\_"great pillar of strength\_". \_"His demise at this important political juncture of transition isagreat loss not only to the NLD but also to the country. We are deeply saddened,\_'\_' said Nyan Win. Win Tin had been in hospital with respiratory problems since 12 March, the Associated Press news agency reported. Blue shirt message Win Tin wasanewspaper editor before his political activism led to his arrest in 1989 and subsequent incarceration in Yangon\_'s Insein prison. Much of his time in prison was spent in solitary confinement and his sentence was twice extended. Freed in 2008, he continued to wear his blue prison shirt as an ongoing protest. \_"When I was released, there are about 500 or so political prisoners... behind the bars,\_" he told the BBC in April 2013. \_"I said that I am going to wear it in the future. So long as these political prisoners are behind bars, I must wear this shirt and this uniform, the colour of the prison, you see, blue colour. I want to show my solidarity with them.\_" Two years after Win Tin\_'s release, Myanmar - formerly known as Burma - held its first elections in 20 years. The polls, nominally, aimed to replace military dictatorship with civilian ...
The funeral of Hanthawadi U Win Tin, was held at the Yay Way Cemetery in Yangon on April 23, 2013. U Win Tin, 85, who served nearly 20 years in prison and the country\_'s longest-serving political prisoner after challenging the military rule by co-founding the National League for Democracy (NLD), died on April 21, 2014. Hundreds of mourners gathered at the funeral, many in blue shirts and holding aloft portraits of their hero. ( VISIT : http://www.myanmarcelebrity.com/...
လူထုအုံကြွမှု ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ဦးဝင်းတင် ပြောဆို (အပိုင်း - ၁) ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေဟာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေးအားဖြင့် ပေါက်ကွဲလုနီးပါး အနေအထားမျိုး ရောက်နေပြီလို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းတင်က အာဖက်အေကို ပြောပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို မီးထိုးပေးနိုင်လောက်တဲ့ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးရဲ့ အာဏာရှင်စနစ် ဖြိုလှဲရေးတိုက်ပွဲတွေ၊ ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲတွေ၊ လူထုဆန္ဒ ဖော်ထုတ်မှု တိုက်ပွဲတွေရဲ့ ဂယက်တွေကလဲ မြန်မာနိုင်ငံကိုပါ ကူးစက်ပြန့်ပွါးလာနေတယ်လို့ဦးဝင်းတင်က ပြောပါတယ်။...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သဘာပတိအဖွဲ့ဝင်ဟောင်း သတင်းစာ ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ကွယ်လွန်ခြင်း တနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်လမ်းပေါ်ရှိ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမမှာ ဒီနေ့ ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နာယက ဦးတင်ဦးအပြင် ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကလည်း အမှတ်တရစကား ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုကျော်ဇောဝင်းက တင်ပြထား ပါတယ်။...
ဧပြီလ ၂၁ ရက်၊ မနေ့က ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သဘာပတိအဖွဲ့ဝင်- သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် နေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်၊ သူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဒီချုပ်-နိုင်ကျဉ်း လူငယ် ဘုံရိပ်သာအကြောင်းနဲ့၊ မနက်ဖြန်ပြုလုပ်မယ့် ဆရာကြီးရဲ့ ဈာပနအခမ်းအနားအတွက် ဒီနေ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ပြင်ဆင်ထားတာတွေကို RFA သတင်းထောက် မဇင်မာဝင်းက တင်ပြထားပါတယ်။...
Hundreds of mourners gather to mark the funeral of Win Tin,aformer journalist and giant of Myanmar\_'s pro-democracy movement, in an outpouring of grief for one of the country\_'s best loved champions of freedom. Duration: 00:41...
A veteran of Myanmar\_'s pro-democracy movement Win Tin has died at the age of 85. The former newspaper editor was one of the founder members of the Anug San Suu Kyi led National League for Democracy. Win Tin\_'s political activities led to his arrest by the ruling military in 1989. He spent 19 years
Win Tin, one of the founders of Myanmar\_'s pro-democracy opposition and the nation\_'s longest-serving political prisoner, dies at the age of 84 after battling for decades against military rule. Duration: 00:42
Myanmar\_'s longest-serving political prisoner, Win Tin, has died aged 85 of kidney failure. Win Tin wasajournalist who helped set up the National League for Democracy with Aung San Suu Kyi. Win Tin spent 19 years in prison after being convicted of anti-government propaganda but was finally freed
Veteran Myanmar Pro-democracy Campaigner Win Tin Dies The co-founder of Myanmar\_'s pro-democracy opposition and the nation\_'s longest-serving political prisoner died on Monday at the age of 84, after battling for decades to bring freedom to the formerly junta-run country. Click here to Subscribe to
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သဘာပတိအဖွဲ့ဝင်- သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်ရဲ့ ဈာပနအခမ်းအနားကို ရန်ကုန် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရေဝေးသုဿန်မှာ ဒီနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီကနေ ညနေ ၅ နာရီအထိ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ကို လေးစားကြည်ညိုကြတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တွေ အပါအဝင် ဂါရဝပြုကြသူ
Win Tin,aveteran of Myanmar\_'s pro-democracy movement, has died at the age of 85. One of the founder members of the Aung San Suu Kyi-led National League for Democracy, Win Tin was seen as highly influential in the push for reform in the South East Asian nation. He served 19 years in prison under
The funeral of Hanthawadi U Win Tin, was held at the Yay Way Cemetery in Yangon on April 23, 2013. U Win Tin, 85, who served nearly 20 years in prison and the country\_'s longest-serving political prisoner after challenging the military rule by co-founding the National League for Democracy (NLD), died
လူထုအုံကြွမှု ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ဦးဝင်းတင် ပြောဆို (အပိုင်း - ၁) ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေဟာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေးအားဖြင့် ပေါက်ကွဲလုနီးပါး အနေအထားမျိုး ရောက်နေပြီလို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းတင်က အာဖက်အေကို ပြောပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို မီးထို
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သဘာပတိအဖွဲ့ဝင်ဟောင်း သတင်းစာ ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ကွယ်လွန်ခြင်း တနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်လမ်းပေါ်ရှိ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမမှာ ဒီနေ့ ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နာယက ဦးတင်ဦးအပြင် ကိုမင်းကိုနို
ဧပြီလ ၂၁ ရက်၊ မနေ့က ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သဘာပတိအဖွဲ့ဝင်- သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် နေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်၊ သူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဒီချုပ်-နိုင်ကျဉ်း လူငယ် ဘုံရိပ်သာအကြောင်းနဲ့၊ မနက်ဖြန်ပြုလုပ်မယ့် ဆရာကြီးရဲ့ ဈာပနအခမ်းအနားအတွက် ဒီနေ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ပြင်ဆင
Hundreds of mourners gather to mark the funeral of Win Tin,aformer journalist and giant of Myanmar\_'s pro-democracy movement, in an outpouring of grief for one of the country\_'s best loved champions of freedom. Duration: 00:41
ရန်ကုန် ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးမှာ ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူနေတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် နာယက သတင်းစာ ဆရာကြီး ဟံသာဝတီဟာ ဒီနေ့မနက်က ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။
I\_'ve createdaPatreon account - you can help me make more videos! http://www.patreon.com/lozeng3r Subscribe for more SFM content: http://bit.ly/1g33WdM Or follow me on Facebook - https://www.facebook.com/Lozeng3r http://www.lozeng3r.com/ Voting for Best Drama closed in November 2012,ahuge th
ကွယ်လွန်သူ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် သဘာပတိအဖွဲ့ဝင်- သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်အတွက် အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့ ယုဒသန်ရိပ်သာမှာ ဒီကနေ့ ဒုတိယနေ့အဖြစ် ကျင်းပနေပါတယ်။ RFAသတင်းထောက် မရတနာဦးက စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
Upon his release from the military detention, U Win Tin was greeted by his political colleagues, U Moe Thu, U Soe Thein, U Aung Thein. This is his first conversation with his life-long friends.